Hery Rajaonarimampianina : « Efa nosokafako ny fampandrosoana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Efa nosokafako ny fampandrosoana »
03/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Fanambintsika ny hitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena. Efa nosokafantsika rahateo ny varavaran’ny fampandrosoana tamin’ny alalan’ireo asa vita », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany mantsy fa mila mijoro ny rehetra ary mila mifanome tanana amin’ny asa ho an’ny fampandrosoana. Tsy afa-mampandroso, hoy ny Filoha, raha mbola misy ny sakantsakana isan-karazany. “Anisan’ny sakana lehibe ny toe-tsaina. Mila manova toe-tsaina isika ary mba hanana ilay toe-tsain’ny Fisandratana. Asehoy ilay tena fitiavan-tanindrazana eo aminao ka mijoroa handresy ny tsy ara-drariny sy ny tsy ara-dalàna…”, hoy hatrany izy.
“Mitarika sy mialoha lalana hatrany ny Filoham-pirenena amin’ny fitadiavam-bahaolana hialana amin’ny fahantrana. Mbola manana fotoana isika handresena izany fahantrana izany. Efa manomboka misandratra ny firenena ka aoka tsy ho voarebireby amin’ny tsaho sy ny laingalainga etsy sy eroa ianareo. Ny Filoham-pirenena no mitarika anareo ka hiaraka hanarina sy hampandroso ity firenena ity”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Notsindriany hatrany fa handroso ary tena handroso lavitra ny firenena rehefa mifanome tanana ny rehetra. Mila manana an’ilay hambo-po iombonana sy ny toe-tsain’ny Fisandratana, hoy izy, raha te hametraka izany fampandrosoana izany.
Ankoatra izay, nambarany fa tsy naman’izay mihemotra ny Filoham-pirenena fa miezaka hatrany amin’ny fijerena ny tena tombontsoan’ny vahoaka. “Misy hatrany ny fingampingana saingy, tsy nataon’ny Filohan’ny Repoblika ho sakana amin’ny asa fampandrosoana ataony izany. Miasa hatrany isika ary fanamby hapetraka ny hanova ny firenena sy handresy ny fahantrana”, hoy hatrany ny Filoha Hery Rjaonarimampianina.